Olana ara-tsosialy Efa tsy mahetsika intsony RaMalagasy…
Be loatra ny olana ara-tsosialy tsy maintsy vahana kanefa hiandrasana fahombiazana ara-toekranena izany.
Ny fiatrehana ny famahana azy anefa dia mety tsy hisy vokatra ara-toekranena mivantana, toy ny filazana foana fa miakatra 5% ny harin-karena nefa tsy misy fiantraikany any amin’ ny vahoaka. Ny tsy fandriampahalemana mampitombo ny herisetra sy famonoan’olona ; ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika sy asan-dahalo efa lasa fiharian-karena ho an’ ny sasany; Mitombo ny fananana rava ho an’ ny tantsaha ka mampitombo mpitsoam-ponenena anatiny ary mampivangongo ny mponina an-tanàn-dehibe fotsiny nefa mivelona amin’ ny fiainana tsy zarizary. Ny olan’ ny fampianarana tsy ahitam-bahaolana mazava kanefa amporisihana ny ray amandreny hampiditra an-tsekoly ny zanany. Etsy ankilan’izay dia maro ireo manao asa tsy mifanaraka amin’ ny diplaoma ananany. Manginy fotsiny ny resaka kolikoly amin’ ny asam-panjakana, ny vola voahodikodina, ny faharavan’ ny toe-tsaina ; ny fanaraotana samihafa ; ny olana ara-politika miseho lany. Be loatra ny zavatra manembantsembana ny finiavana te handroso. Misy olana fototra mampitontongana ny fiananan’ ny Malagasy ary misy fahasimban’ny toe-tsaina mihamahazo vahana eto. Difotry ny adim-piainana ve Ramalagasy ka tsy mahetsika intsony, ka dia manaiky fotsiny izay hitondrana azy ?